Long makumbo Nursery muhari - China Qingdao King Good New Materials
Qingdao King Good New Zvekushandisa Co., Ltd. ari Nursery nehari / Containers (emaruva) Kushandiswa yepamusoro mbishi zvinhu pamusoro PP, Pe uye Poe mhando nhatu yakatsvuka zvinhu uye nokukamura yakarurama, ipai yakazara kutamba kuti zvakanakira mhando nhatu mbishi zvinhu, kuvandudza zvikuru uye chiwedzere risanyatsobuda, uye kunowedzera upenyu basa Nursery Pot. Kireshi hari / Containers (emaruva) Chimiro zvakagadzirwa rakasiyana nemamwe, mwero kukura abudise uye kufefetedza kushanda rubatsiro maruva akura. The rinokosha magadzirirwo kumucheto nemamiriro gallon hari hwezvekukurukurirana zvikuru zvokufambisa, vachizvitakudza uye okuchengetera zvinhu. Zvinowanzoshandiswa ruva, chevana chirimwa, muriwo, donje, visi, miriwo.
makumbo Long Nursery hari Chazvakanakira:
Chinonyanya abudise Buri iri kuwedzera mujinga zvetsika kwemawakaridyara, pamwe makumbo matanhatu nechepasi. zvakagadzirwa ichi kunowedzerwa zvikuru abudise uye mhepo permeability.
makumbo Long Nursery hari Feather:
Next: Kireshi nehari MC
3 Gallon Black Nursery nehari
3 Gallon Plastic nehari
3 Gallon hari
5 Gallon Garden hari
5 Gallon Nursery hari
6 padiki Flower Pot
90mm Flower nehari
9cm Plastic Nursery nehari
Black Plastic Gallon emaruva
Flower Gallon hari
nduru pamusoro Nursery hari
Gallon Plant hari
Garden Flower Nehariwo
Large Garden Mudyari
Nursery hari In China
Nursery Tree nehari
Plastic 5 Gallon Kukura hari
Plastic Gallon emaruva
Plastic Nursery Richikura hari
Round Nursery nehari
Vertical Garden nehari